Times Of Nepali » Breaking : कोरोना जोखिम बढेपछी एकाबिहान यी ४९ जिल्लाका लागि सरकारबाट आयो महत्त्वपूर्ण सूचना !
Breaking : कोरोना जोखिम बढेपछी एकाबिहान यी ४९ जिल्लाका लागि सरकारबाट आयो महत्त्वपूर्ण सूचना !
काठमाडौं – कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासले विभिन्न ४९ जिल्लामा निषेधाज्ञा भएको छ । संक्रमण फैलदै गएपछि त्यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि ३९ जिल्लामा पूर्ण निषेधाज्ञा गरिएको छ । १० जिल्लामा भने आंशिक निषेधाज्ञा गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा या लकडाउन गर्ने अधिकार प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहलाई प्रत्यायोज गरिएपछि आइतबार बिहानसम्म ४९ जिल्ला र कयौँ पालिकाहरूमा अनेकखाले प्रतिबन्ध लगाइएको छ । *** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिल गर्नुहोला **
यस्तै संखुवासभा, रुपन्देही, चितवन, धनकुटा, पाल्पा, रामेछाप, दोलखा, नवलपरासी पूर्व, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, अर्घाखाँची, कास्की, कैलाली, प्यूठान, दैलेख, कञ्नपुर, डडेल्धुरा र तेह्रथुममा पूर्ण निषेधाज्ञा गरिएको छ । यसअतिरिक्त बैतडी, कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिम, डोल्पा, मोरङ, डोटी र दाङ छन् ।
नुवाकोट, जुम्ला, दार्चुला, झापा, मकवानपुर धादिङ, तनहुँ, बाग्लुङ ,रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा भने आंशिक निषेधाज्ञा गरिएको छ । गुल्मी, लमजुङ, उदयपुर, कालिकोट र पाँचथरमा लगाइएको निषेधाज्ञा भने हटाइएको लामिछानेले जानकारी दिए । *** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***